Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh’’ nidaamka federaalka waa wax dastuurka ku qoran oo aan la qaloocin karin
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud oo maalintii shalay khubad ka jeediyay Jaamacada magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in qaadashada nidaamka federaalka uu xal u yahay sida uu hadalka u dhigay mashkalada dalka ka jira.
“Aada ayaan uga mahad celineysa sida qadarinta mudan oo ay inoo soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo, waana uga mahad celineynaa arintaa iyada ah ayuu yiri,’’ madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud oo hadal qaaday shirkii maamulka Jubba lagu dhisay iyo khilaafaadkii ka dhashay ayuu sheegay in waxyaabihii la isku hayay ay ahaayeen siyaasad.
“Anniga ma dhihin hoolkan wixii ka socday wax xun ayeey ahaayeen,wixii siyaasad ah waa iska halkeeda, Salaadiin, dhalinyaro, odayaal iyo culumaa’udiin iyo dad sharaf leh isugu jiraan oo meel isugu yimid ma xumaan karto, laakiin wax yaabo qaar oo siyaasadeysan oo hoos ka jiray ayaa jira”ayuu yiri madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud.
Madaxweynaha ayaa mar uu soo hadal qaadan arrinta federaalismka ayuu sheegay in wax cad oo waajib qayaxan uu yahay oo dastuurka ku qoran, taasoo uu tilmaamay in aanay isaga iyo dowladdiisa qaloocin karin.
“Waxaa soo hartay arrinta rederaalismka ku saabsan. wax hadda Xasan Sheekh dowladda madaxda ka yahay, ra’iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa ay maanta ka hadli karaan oo qaloocin karaan ma ahan, waa arrin is faham iyo heshiis siyaasadeed horay u dhacay la soo gaaray, waa arrin dastuurka ku qoran, marka ma jeceshahay iyo ma jecli ma ahan ee waa mandate la fuliyo oo cad ay tahay”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo faah faahinayay arrinta Federaalka ee uu muranka ka jiro.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ayaa booqashada uu ku tagay magaalada Kismaayo waxaa ay u muuqata mid uu ku dhisayay kaloosinida dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo aragti kale ka aaminsanaa dowladda dhexe.